Zinedine Zidane ayaa dhaleeceeyay go’aankii LaLiga ee uu ugu ogolaaday inuu ciyaaro kulankii Real Madrid ay barbaraha goolal la’aanta ah la gashay Osasuna ee barafka culus.
Gobolka Isbaanishka ee Pamplona waxaa ka dhacay baraf xoog leh usbuucii la soo dhaafay, laakiin Madrid waxaa sidoo kale haleelay cimilo xumo Storm Fiomena, taasoo ka dhigtay inay Real Madrid ku xayirnaato garoonka diyaaradaha muddo afar saacadood ah.
In kasta oo garoonka Osasuna ee El Sadar uu maray tijaabo la isla jaan qaaday oo si caadi ah loo sharraxay, ayaa dusha sare waxaa ku daboolay baraf, kubadduna waxay ahayd mid aan caadi ahayn. ma dhaqaaqayo markay ciyaartoydu isa soo dhiibaan.
Real Madrid ayay dhib ku noqotay in ay lumiso 2 dhibcood maadama ay hogaanka la wareegi lahayd maadama kulankii Atletico Madrid loo hakiyay baraf awgeed. Waxay sidoo kale aad uga hooseyn lahaayeen Barcelona kaalinta seddexaad, kaliya seddex dhibcood ayey ka hooseeyaan.
Wadahadal uu la yeeshay warbaahinta ciyaarta ka dib, Zidane wuxuu dhaleeceeyay go’aanka loo ogolaaday inuu ciyaaro wuxuuna yiri: “Ma aheyn ciyaar kubada cagta ah, taasi waa sida aan dareemay wixii dhacay kadib. Ciyaarta ayaa ahayd in la baajiyo. Waxaan ka cabanayaa ciyaartan maxaa yeelay cimiladu ma fiicna. “
Real Madrid ayaa haatan leh 37 dhibcood, waxayna hal dhibic ka hooseysaa Atletico Madrid oo leh 38 dhibcood iyo seddex kulan oo harsan, taasoo ka saacidi karta inay toban dhibcood ku hogaamiyaan qeybta hore. xilli.
Barcelona oo garaacday Granada ayaa xaqiijisatay kaalinta seddexaad iyadoo leh 34 dhibcood.